Ekwenyere m na Web 3.0! | Martech Zone
Ekwenyere m na Web 3.0!
O yikarịrị ka ihe mmịfe a ọ na-eweta ịsụ ude na ịsụ ude mgbe m gosipụtara ya n'ihu ndị ọrụ ibe m. Aghaghị m igosipụta ya. Enweela uche dị iche iche na webụ n'oge gara aga. Anyị nwere Weebụ 0.0 nke bụ ederede na bọọdụ mkpọsa. Cheta ụbọchị ndị ahụ? Na-eche ka onyonyo ahụ kwụzie ahịrị site na iji otu 1200 baud modem gị! (Ee, ama m na emeela agadi!)
Akụkọ Ọwa Ozi
Web 1.0 ghọrọ n'ezie oge nchekwa na njikwa. AOL (cheta 'tinye okwu ỌGWỤGWỤ) nwere nnukwu njide na ụgbụ na ọtụtụ ebe ụzọ ámá pụtara na .ntanetị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka mmadụ chọta gị, ọ ga-efu gị nnukwu ihe na mgbasa ozi ọkọlọtọ na webụsaịtị mpaghara.
Web 2.0 ka bụ oge njikwa - mana ugbu a, Nchọgharị Nchọgharị, ya bụ Google, nwee okporo ụzọ weebụ. Anyị ka nọ na Web 2.0 taa - ọ bụrụ na a ga - ahụ saịtị gị, ị ga - aka nweta ya na nsonaazụ ọchụchọ. Weebụ mmekọrịta na-amalite ịpụta ugbu a, n'agbanyeghị. Ndi bekee na-agbakota na ịkekọrịta ibe edokọbara site micro-ịde blọgụ ngwa na ibe edokọbara.
Web 2.0 hụrụ nbelata nkekọrịta faịlụ ndị ọgbọ na ibe. Napster Akwatupụrụ ma ndị na-agba ohi, ndị na-agbawa agbawa na ndị ohi ga-abanye n’ime ala. Ihe nkesa zoro ezo na sava ndị na-amaghị aha ha site na Pirate Bay abanyela n'ihu dị ka 'free' na-anọgide na ọnụahịa nke Internetntanetị.
Ntanetị 3.0 = liningjụ Njikwa Ọchịchọ
Web 3.0 na-esote, m kwenyere na ọ nwere ike ịbụ Wild West niile ọzọ! Nchọpụta ọchụchọ na-akpachara anya ka ndị mmadụ na-ahazi onwe ha, na-ekerịta ọdịnaya ha site na syndication (Semantic Web), micro network, na ngwa ngwakọ na-arụ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị ma na-etinye ekwentị mkpanaaka.
Web 3.0 = Ohi
My votu bụ na paire ga-eme ka a nnukwu itu ukwu dị ka ezi ndị ọgbọ na-ọgbọ nhazi na-aghọ nkịtị site adreesị IP na-aghọ ndị ọzọ static gafee elu-bandwit ụlọ netwọk. N'oge Napster, ndị ọgbọ na ibe pụtara n'ezie ndị ọgbọ na-Napster-na-ọgbọ. Napster bụ ọnụ ụzọ maka nkwukọrịta niile. Ihe nzọ m dị na ntanetị ntanetị ebe ị nwere ike ijikọ ngwa gị na ndị enyi tụkwasịrị obi wee zipụ faịlụ na enweghị sava ọ bụla (na mpụga ISP gị) maara. A gaghị amata faịlụ ndị ahụ n'onwe ha, n'agbanyeghị, site na ụfọdụ usoro ezoro ezo.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nkesa CD na egwu egwu n'etiti ụmụ akwụkwọ taa ga-aga na ngwa na-enye ohere ịkekọrịta na-enweghị onye ọ bụla n'etiti. Nrụgide sitere na ụlọ ọrụ egwu na ihe nkiri na gọọmentị ga-abụ nnukwu iji nwee ike nledo na netwọkụ ụlọ anyị iji gbalịa soro na ịta ahụhụ ọhụụ a nke ndị ohi. Jisie ike!
Web 3.0 = Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Tinyere mbelata nke nchịkwa njikwa njikwa, ọbịbịa nke mgbasa ozi 'njikwa onwe gị' ga-etokwa. Google agakwaghị ewepụ azụmahịa n'etiti ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta, teknụzụ ọhụụ ga-enye ndị mgbasa ozi ohere ijikwa mgbasa ozi nke ha n'ofe ndị mbipụta ha chọrọ - a ga-akwụ ndị na-ebipụta akwụkwọ ụgwọ ozugbo.
Tags: mkpụrụ edemede3 web3.0 web
Apr 29, 2008 na 2: 08 AM
Enwere m mmasị n'okwu gị banyere paireti na oge ọhụrụ nke ga-abụ web 3.
Naanị n'izu a, MS wepụtara nnukwu ogwe na mgbanwe ha
Enwere m ike ịhụ otu ọnọdụ ebe a ga-eji ọtụtụ ngwa site na usoro ndenye aha na ụbọchị na-abịa IMO mgbe kọmputa ọhụrụ ga-adịkarị n'efu na-enye na ị kwenyere ịkwụ ụgwọ maka ngwanrọ gị site na usoro metered gị njikọ BB.
Anọ m na-ele ọgụ nke ụlọ ọrụ ndị ahụ na-asọba na mbara igwe yana dịka mbọ teknụzụ na-atụ aro, ngwa jukebox ha ga-abụ nnukwu ọnụọgụ maka ndị depu IT na ụlọ ahịa ngwanrọ otu.
Apr 29, 2008 na 10: 42 AM
Sọftụwia dị ka Ọrụ na-egbu nje ahụhụ ahụ… Echere m na ọzọ ga-abụ ngwa ndị na-abanye n'ime ngwa SaaS. Mgbe m na - ekwu maka izu ohi - ekwesịrị m ikwu na m pụtara naanị na mgbasa ozi dịka egwu, vidiyo, wdg.
Nnukwu nghọta, daalụ!
Apr 29, 2008 na 6: 54 AM
Hey ebe Doug,
Enwere m mmasị n'echiche gị na nghọta m na igbe ozi m kwa ụbọchị. Daalụ nke ukwuu!
Na nso nso a ka m na-anụ ụfọdụ raketị banyere ihe Web 3.0 ga-abụ. Yabụ, ọkwa gị bụ oge. iTunes na-egosi na ndị mmadụ ga-enwe a toụrị ịzụrụ ọdịnaya n'ụzọ kwụ ọtọ ma dị warara ma ọ bụrụ na 'akwụ ụgwọ' ahụmịhe karịrị nke onye na-apụnara mmadụ ihe 'ahụmahụ' (iTunes bụzi # 1 onye na-erere egwu na US)
Echere m na paireti ọdịnaya bụ 'ọnọdụ mmadụ' larịị nke onu ma m ga-achọ ịmata ihe ị na-eche ụlọ ọrụ dị ka Apple ga-eme na Web 3.0, Echere m na ha chere na ha ga-amalite ime ihe 2.0!
Anọ m na-ede blọgụ Foodie banyere obodo m nọ na ya ugbu a, Kyoto. Amalitere m ihe dị ka ọnwa 8 gara aga. M zoro aka na saịtị gị ma nwee ọganihu ọtụtụ oge n'oge ahụ. Ugbu a, m ruo n'ókè ebe m chọrọ ime ka ọ bụrụ oge mbụ. Anyị na-eme ntakịrị nkwado nkwado ugbu a ma na-enye onyinye maka nnukwu echiche. Kwụsị ma ọ bụrụ na-amasị gị, ma chọpụta nri! Anyị enwetala isi azụ azụ, nsị na-afụ ụfụ na-asọ oyi, wee gabazie.
Lelee ya ebe a: Nyocha KyotoFoodie 'Win Junk'.
Web 3.0 ga-abụ 'anụ ọhịa West ọzọ'? Ummm! Enweghị m ike ị chere !! WETA YA!!!
M hụrụ n'anya otú omiiko ị bụ na gị na blog, isiokwu gị edoghi bụ mma! Na-akpali akpali!
Apr 30, 2008 na 9: 18 PM
Daalụ, daalụ !!